WTTC waxay rabtaa safarka inuu ahaado mid amaan ah laakiin Madaxweyne Biden wuxuu hayaa fure u ah talaalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WTTC waxay rabtaa safarka inuu ahaado mid amaan ah laakiin Madaxweyne Biden wuxuu hayaa fure u ah talaalka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Kolombiya Wararka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Hoteelada & Dalxiisyada • LGBTQ • Wararka Mexico • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
sawirka whatsapp 2021 04 25 at 11 56 56 2
Markii la soo gabagabeeyay shirkii WTTC ee ka dhacay Cancun, Mexico. Ma jirin wax dood dadweyne ah oo ku saabsan xaaladda musiibada ee Hindiya, laakiin agaasimaha guud ee Gloria Guevara ayaa qaadatay hadalka oo wareysi la yeeshay Manuel Santos, oo saxeex la leh 170 qof oo kale si ay ugu riixdo Madaxweynaha Maraykanka Biden inuu furo xayiraadaha lahaanshaha, u oggolaanaya tallaalku inuu gaadho dalalka soo koraya
Markii agaasimaha guud ee WTTC Gloria Guevara uu wareystay madaxweynihii hore ee Colombia Juan Manuel Santos shirkii dalxiiska ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Cancun, waxay qariyeen sir aysan rabin inay adduunka la wadaagaan. Ammaan ma nihin illaa qof walba uu ammaan noqdo. ”
Fiditaanka musiibada ee fayraska iyo cawaaqib xumada ka dhalatey Hindiya ayaa ka dhigey gabagabada Madaxweynaha Mareykanka Biden "Anaga ma nabad qabno ilaa qof walba uu badbaado" oo si aad ah ugu habboon adduunka dalxiiska iyo warshadaha dawooyinka. Waxaa jiray hadal yar oo ku saabsan Hindiya oo ku saabsan Cancun, laakiin xaqiiqda ayaa ah in fayraskani si dhakhso leh u socdo isla markaana dhammaan horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyay adduunka laga yaabo inuu ruxo.
Madaxweyne Biden ma u istaagi doonaa ereyadiisa? Maxay sameyn doonaan WTTC iyo 170 madaxdii hore ee dowladaha iyo kuwa ku guuleystay Nobel Peace Prize si loo dhageysto warqadooda furan? Ma jirin jawaab degdeg ah oo ka soo baxday Aqalka Cad.
"Ma nabad qabno ilaa qof walboo badbaado qabo" ayaa lagu soo gabagabeeyay wareysi fool ka fool ah oo lala yeeshay Madaxweynihii hore ee Colombia iyo Ku guuleystaha Nobel Peace Prize 2016 Juan Manuel Santos iyo Madaxa Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka Gloria Guevara shirkii WTTC ee ka dhacay Cancun Isniintii.
The Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka (WTTC) iyo Madaxweynihii hore ee Kolombiya Juan Manuel Santos wuxuu ula dhaqmay taageeradooda hadalka madaxweynaha Mareykanka Biden mid qarsoodi ah wuxuuna hubiyay in kalfadhigan oo dhan laga gooyay tooska. Warbaahinta, oo ay ka mid yihiin eTurboNews, ayaa laga hor istaagay helitaanka duubitaanka kal-fadhigan ugu muhiimsan Shir-weynaha.
Madaxdii hore ee Qaranka iyo kuwa qaata abaalmarinta Nabada ee Nobel waxay ugu baaqeen Madaxweyne Biden inuu ka tanaasulo sharciyada hantida aqooneed ee talaalka COVID oo fure u ah furitaanka fursada umadaha soo koraya ay u soo saaraan ama u helaan talaalada sida degdega ah loogu baahan yahay. Madaxweynaha Mareykanka Biden wuu saxsanaa markuu ka dhawaajiyay fahamka dunidan isku xiran. Safarka iyo Dalxiisku waxay ka dhigayaan adduunku inuu isku xirnaado, adduunkuna si nabadgelyo ah uma nabad galo illaa muwaadin kasta oo waddan kasta u nabad galo.
WTTC waxay meteleysaa shirkadaha gaarka loo leeyahay ee adduunka Safarka iyo Dalxiiska. Mr. Santos waa shaqsi weyn oo ka tirsan waaxda dawladda. Waxaa laga yaabaa in warqadan loo diray Madaxweynaha Mareykanka aysan aheyn fariin urur warshadeed gaar loo leeyahay doonayo inuu ku lug yeesho.
Mr. Santos oo la wadaagaya farriintan muhiimka ah, maadaama uu mid u saxiixay madaxweynaha Mareykanka Biden bishii Abriil 14 Gloria Guevara iyo wufuuddii ka qeybgashay shirkii WTTC ee ka dhacay Cancun, waa mid muhiim ah oo muhiim ah.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) sacab tumay warqadda maalin kadib markii la saxiixay. “Warqadani waa dariiq muhiim u ah warshadaha caalamiga ah ee socdaalka iyo dalxiiska inay mowqif istaagaan isla markaana ay talaabo horay u qaadaan sidii adduunka looga dhigi lahaa meel nabdoon inta lagu jiro dhibaatadan. Cudurka faafa ee adduunka waa inuusan ka dhigin danaha shirkadaha gaarka loo leeyahay dawooyinka faa iidada u leh kelidii wax-uqabso
Akhri oo guji xiga si aad u aqriso warqadda buuxda ee Madaxweynaha Mareykanka Biden una daawato fiidiyowga shirkii ugu horreeyay ee WTTC.